Dhageyso:-Ra’iisul Wasaare Kheyre oo faah faahiyey heshiisyadii uu lasoo galay Madaxda Midowga Yurub – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre oo Maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib markii shir uu uga qeyb galay dalka Biljamka ayaa waxa uu ka hadlay shirkii uu ka qeyb galay iyo kulamo uu la qaatay masuuliyiin uu la kulmay iyo heshiisyadii dhexmaray.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa ayaa sheegay in uu la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Biljamka oo ay ka wada hadleen Iskaashi dhanka arrimaha Amniga,sidoo kale Madaxa ugu sareeya Midowga Yurub iyo Madaxda Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Horumarka.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dhammaan Safiirada Midowga Yurub uu kala hadlay arrimaha Soomaaliya sigaar ah xaalada Soomaaliya iyo sidii Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen Ciidamada AMISOM amniga dalka.
Waxa uu sheegay in Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ku hesiiyeen qodobadaan Soo socda
1:- In mashruuca dib-udhiska qorshihii leysla ansixiyey ee kala guurka dowladda Soomaaliya loogu deeqo 80 Milyan oo Euro oo u dhigantay Boqol Milyan oo Dollar.
2:- In dowladda kala Shaqeeyaan arrimaha horumarka sida Kheyraadka kaluumeysiga sidii Ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan uga faa’iideysan lahaayeen.
3:-Sidoo kale sidii looga hortegi lahaa jarida dhirta iyo nabadguurka iyo dhoofinta Dhuxusha Sharcidarrada ah.
4:- Sidoo kale in shirka Sanadkiiba mar la qabto ee looga hadlo arrimaha Soomaaliya ee lagu qabto Midowga Yurub ee dhici doona 26 June ee Sanadkaan kaas oo ay ka wada qeybgeli doonaan Madax ka tirsan dowaldda,isla markaana lagu falanqeyn doono in Soomaaliya lagu caawiyo dhaqaale.
Hoos Ka Dhageyso Shirka Jaraa’id ee Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Wasaaradda waxbarashada oo shaacisay waqtiga uu bilaabanayo imtixaanka Dugsiyada Sare